सुनको भाउ Archives – Samacharpati
एक सय रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ कति पुग्यो त ! तोलाको !
काठमाडौं, २९ असोज । आज बुधबार सुनको भाउ घटेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यबसायी महासंघले जनाए अनुसार आज सुनको भाउ एक सय रुपैयाँ घटेको हो । मंगलबार एकै दिन ६ सय रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज एक सय रुपैयाँ घटेको हो । महासंघका अनुसार आज आज […]
काठमाडौँ, ९ असोज । आज नेपाली बजारमा सुनको भाउ ह्वात्तै घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ६ सय रुपैयाँ बढेको सुनको भाउ आज एकैपटक एक हजार रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार छापावाल सुन ७२ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको थियो […]
काठमाडौँ, १२ भदौ । बिहीबार सुनको भाउ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा आँठ सयले बढेको हो । आज सुन तोलाको ७३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य ७३ हजार १ सयमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार स्थिर रहँदै सुन तोलाको ७२ […]